Soomaaliya Oo Hay’adaha Caalamiga Ah Ee Dalkeeda Ka Howl-gala U Qabatay Inay 90 Cisho Ku Soo Guuraan – somalilandtoday.com
Soomaaliya Oo Hay’adaha Caalamiga Ah Ee Dalkeeda Ka Howl-gala U Qabatay Inay 90 Cisho Ku Soo Guuraan
(SLT-Muqdisho)-Golaha wasiirrada ayaa kulan ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku amreen hay`adaha caalamiga ah ee ka hawl-gala gudaha Soomaaliya ee deggan meel ka baxsan dalka inay ku soo guuraan muddo 90 cisho gudaheed ah.
Golaha oo uu shir guddoominayay ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa waxay ku ansixiyeen go`aankan oo ay dhawaan soo saartay wasaaradda qorshaynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Wasiirka qorshaynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha, Jamaal Maxamed Xasan, oo bishii August 29, 2018 kulan la qaatay madaxda hay’adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka hawl-gala ayaa ku war-geliyay ga’aan ay dawladdu qaadatay oo dhigaya in dhammaan hay’adaha caalamig ah ay xafiisyadooda ka furtaan gudaha dalka, kuna shaqo billaabaan kahor bisha January sanadka 2019, isaga oo ku wargeliyay in hay’addii u hogaansami waysa go’aanka dawladda lagala laabanayo ruqsadda.
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururrrada bulshada rayidka ah ayaa qaba in tallaabo wanaagsan ay tahay in hay`adaha ay dalka u soo guuraan, “Labo ujeeddo ayaa laga leeyahay in hay`adaha ay u soo guuraan gudaha dalka, mid waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo helaan, tan labaadna waa in laga warqabo howlaha ay hay`aduhu hayaan, sidaasd darteed haddii aan nahay ururrada bulshada rayidka ah waan soo dhoweyneynaa,” ayuu yiri.
Hay`adaha qaar ayaa hore ugu guuray Muqdisho, kuwaas oo qaarkood ammaan darro la kulmay. Shirwac ayaa qirsan in amniga uu caqabad ku yahay hay`adaha, balse wuxuu aaminsan yahay in dowladdu ay ka shaqeyneyso horumarinta ammaanka.
Dhowr goor oo hore ayaa dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladihii kale ee ka horreeyay ay ku celceliyeen in hay`adaha ka shaqeeya arrimaha Soomaaliya ee deggan bannaanka dalka ay soo guuraan, balse hay`ado badan uma hoggaansamin.
Cabdullaahi Shirwac ayaa sheegay in marka laga reebo amniga, sababta kale ee ay hay`adaha uga caga jiidayaan inay Soomaaliya u soo guuraan ay tahay dhanka sharciga iyo sharcigii ay kula shaqeyn lahaayeen dowladda Soomaaliya oo aan weli la ansixin.
“Muddo dheer ayay hay`aduhu ku shaqeynayeen sharcigooda, sidaas darteed inay ka guuraan sharcigooda oo ay mid kale ku shaqeeyaan aad ayay u adag tahay”. Ayuu yiri.
Dowladda ayaa sheegtay in qorshaha hawl-gelinta xafiisyada hay’adaha caalamiga ah ee Soomaaliya yaa fududaynayso dardar-gelinta wada-shaqaynta hay’adaha iyo dawladda federaalka Soomaaliya.